MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 937
>Cartoon Saw Ngo - The cricle of dictatorship
>cartoon in 1970
>SUU 66, Lay Lay (Toyo) - Poem
>New Mayers Appointed by USDP Government
>ဒေၝင်းစာပေ ၃၅ိံစြ်ူပည့် စာပေအိုံပညာရင်ြမဵားအတကြ် ကဵန်းမာရေးအလငြေ ပေးအပ်မည်
> ဒေၝင်းစာပေ ၃၅ိံစြ်ူပည့် စာပေအိုံပညာရင်ြမဵားအတကြ် ကဵန်းမာရေးအလငြေ ပေးအပ်မည် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၊ ၂၀၀၈ အတြေးအူမင် မဂ္ဂဇင်းကို စဉ်ဆက်မူပတ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ဒေၝင်းစာပေ ၃၅ိံစြ်ူပည့်အူဖစ် စာပေအိုံပညာရင်ြမဵားအတကြ် ကဵန်းမာရေး...
>ဧကစာခဵြိ – ကာတနြ်း – မအအောင် သင်တာ ဘာလဲ
> ဧကစာခဵြိ – မ အ အောင် သင်တာ ဘာလဲဖေဖော်ဝၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related...
>ယာတောက သာေူဗာ – စာဆိုတော်တိုႛနဲႛ အမဵြိးသားရေး အစဉ်အလာ
> စာဆိုတော်တိုႛနဲႛ အမဵြိးသားရေး အစဉ်အလာယာတောက သာေူဗာဖေဖော်ဝၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ ကိုဟိုဒင်းရေ- ”ိံငြ်းလေးတမြံမြံ၊ လေအေးလေးတသုန်သုန်နဲႛ ခဵမ်းလိုႛမဵားတုန်္ဘပီဆိုမြူဖင့် …” ကဵနော်လည်း စာဆိုတော်နေႛတေအြေုကာင်းရေးမယ်လိုႛ စဉ်းစားလိုက်တာနဲႛ ကဗဵာလိုလို၊ ကေူပာင်လိုလိုတြေ ခေၝင်းထဲက...
>ူမန်မာူပည်ရဲႚ သက်တော်ရညြ် ကာတနြ်းဆရာုကီး ဖေသိန်း ၈၄ိံစြ်ူပည့်
>ူမန်မာူပည်ရဲႚ သက်တော်ရညြ် ကာတနြ်းဆရာုကီး ဖေသိန်း ၈၄ိံစြ်ူပည့် မောင်ရစ်ဖေဖော်ဝၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ူမန်မာူပည် စာနယ်ဇင်းလောကတငြ် သက်တော်ရညြ် စာနယ်ဇင်းကာတနြ်းဆရာုကီးအူဖစ် ထင်ရြားသူ ကာတနြ်းဖေသိန်း ၈၄ိံစြ်ူပည့် မြေးနေႚဖိတ်စာကို...
>ဗိုလ်ခဵပ်ြမြးဋ္ဌကီးရဲ့နောက်ဆုံးပေၞယုတာ
> ဗိုလ်ခဵပ်ြမြးဋ္ဌကီးရဲ့နောက်ဆုံးပေၞယုတာမိုးမခ စာဖတ်သူ (ရန်ကုန်)ဇန်န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ သူ့ ရဲ့လက်စြဲတော် ဗေဒင်ဆရာရဲ့တက်ြခဵက်မြေုကာင့် ဗိုလ်ခဵပ်ြမြးဋ္ဌကီး သန်းရေတြစ်ယောက် သူႚရဲ့ ...
> အမေရိကန်မြ ဒုက္ခသည်ိံငြ့် ဂရင်းကတ်ခရီးသြားလက်မတ်ြကိုင်ဆောင်သူမဵားကိုစကဿာပူက လက်မခံတော့မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဇန်န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ အမေရိကန်ိုံင်ငံကူးလက်မတြ် သိုႚမဟုတ် မိခင်ိုိံင်ငံ၏ သက်တမ်းရြိုံင်ငံကုးလက်မတြ် ကိုင်ဆောင်သူမဵားသာ စကဿာပိူိုံင်ငံတငြ်းသိုႚ ၀င်ရောက်ခငြ့်ူပတြော့မည်ူဖစ်ေုကာင်း စကဿာပူ...
>ဇင်ဝေသော် – သာသနမောဠိသိုႚ
> သာသနာမောဠိ သို့ သစ္စာစကား ဇင်ဝေသော် ( အေ၊ အို၊ အေ၊ ဘီ )ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ “ချစ်သားတို့ စိမ်းညို့ မို့မောက်နေသည့်တောအုပ်ကို ကြည့် လိုက်ကြ။ ထိုတောအုပ်ကို...
>သုဝဏ္ဆဘူမိ မသြည် SCC
> သုဝဏ္ဆဘူမိ မသြည် SCC အရင်ြဉာဏိကဇန်န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ သုဝဏ္ဆဘူမိ လေဆိပ်ကအထက်ြမြာ လာဋ္ဌကိမြည့်သူကို ဟိုဟိုဒီဒီရြာမိတယ်။ သူႛကိုလည်း ကိုယ်ကမတြေႛဘူး။ ကိုယ့်ကို လည်း သူကမတြေႛဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်သူပၝလိုႛ မိတ်ဆက်ေူပာဖိုႛ...
>ကေ – ပုံရိပ်
> ပုံရိပ် ကေဇန်န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
>ဆန်ဖရန်စင်္စကိုသိုႚ အိုလံပစ် မီးရြးတိုင် လာမည်
> ဆန်ဖရန်စင်္စကိုသိုႚ အိုလံပစ် မီးရြးတိုင် လာမည်၊ တရုတ်အိုလံပစ် သပိတ်မြောက်သံမဵား အရြိန်ူမငြ့် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဇန်န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ လူႚအခငြ့်အရေးခဵြိးဖောက်မမြဵာိးံငြ့် လတ်ြလပ်စြာ ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုခငြ့် တင်ုးကပ်စြာ ထိမ်းခဵပ်ြထားသော တရုတ်ိုံင်ငံက...
>ခန်ြပန်းစိန် –ူမန်မာ့ ထုံးစံသစ်မဵား
>ူမန်မာ့ ထုံးစံသစ်မဵား ခန်ြပန်းစိန်ဇန်န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ (၁) ဒီလိုနေရာလေးမြာ နေရတာ သိပ်သက်သာတာပဲ။ ဘာလိုႚဆို ဒီမြာက ဘယ်လောက်ပဲ ကိုယ်က အကူအညီပေးခဲ့ဖူး ခဲ့ဖူး၊ ဘယ်နေရာမြာပဲူပန်တြေႚတြေႚ၊ိံတ်ြဆက်တာ...
>ထိန်လင်း – မရြိမူဖစ် ရမ်ဘို
> မရြိမူဖစ် ရမ်ဘိုထိန်လင်းဇန်န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ဇန်န၀ၝရီ ၂၅ ရက်နေႛက စလိုႛ အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုမြာ ရုံတင်နေတဲ့ “ရမ်ဘို“ ရုပ်ရင်ြကာုးကည့်္ဘပီုးက္ဘပီလား။ မုကည့်ရသေးလိုႛ ကိုယ်တိုင် သြားမုကည့်ူဖစ်သေးရင်တောင် နီးစပ်ရာလူတေကြို သြာုးကည့်ဖိုႛ...
>အောင်ခဵြိူမ – စက်တင်ဘာ ၀ိဥာဉ်တြေ
> သြေးစနြ်းလက်တေကြို ဘယ်သူတြေိံတ်ြဆက်လေမလဲဂဵာနယ်လစ်ကိုကိုဇန်န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၆ ခိုံစ်ြအတကြ်ူမန်မာ့ရုပ်ရင်ြထူးခဋ္ဋန်ဆုတေကြို ဖေဖော်ဝၝရီလဆန်းပိုင်းမြာ နေူပည်တော်မြာ ပေးတော့ မယ်တဲ့ခင်ဗဵ။ စက်တင်ဘာ လူသတ်စစ်အစိုးရက ပေးအပ်ခဵီူးမငြ့်မယ့် အကယ်ဒမီဆုပေးပြဲဋ္ဌကီးပေၝ့ခင်ဗဵာ။ူပည်တငြ်း ထုတ်...
> ရမ်ဘိုနဲႚ ရုပ်ရင်ြရုံထဲက ခဵစ်သော ဗမာူပည် မီးလ္တွံေူမခြေး ဇန်န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မစံတိုႚရေ ငၝတို ရမ်ဘို ဒီနေႚ သြာုးကည့်ုကတယ်။ သောုကာနေႚက ရုံတင်တာပၝ။ ဗမာူပည်ထဲကို ခရစ်ယန်အဲန်ဂဵီအို အဖြဲႚ၀င်တေကြို...
>မောင်စစ်မင်း (ူမန်မိာိုံင်ငံ တေးရေးဆရာမဵား) – ငၝသည် တော်လန်ြရေး
> ငၝသည် တော်လန်ြရေးမောင်စစ်မင်း (ူမန်မိာိုံင်ငံ တေးရေးဆရာမဵား)ဇန်န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ငၝတိုႚသည် ငၝတိုႚ၏ိံလြုံးသားမဵားအား မေုးကည့်၏ငၝတိုႚိံလြုံးသားမဵားကေူဖ၏ ငၝသည် တော်လန်ြရေး ငၝတိုႚသည် ငၝတိုႚ၏ အသြေးအသားမဵားအား မေုးကည့်၏ငၝတိုႚ၏ အသြေးအသားမဵားက...
> ကဗဵာဆရာစောဝေ အင်းစိန်ထောင်သိုႛေူပာင်းရြေႛခဵပြ်ြေိာံင်ခံရ၊ စာပေအသိုင်းအ၀ိုင်းက တခုခု တုံႛူပန်သင့်သည်ဟုေူပာဆိုမမြဵားရြိမိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ဇန်န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ူပည်ထဲရေးဝန်ဋ္ဌကီးရုံးတငြ် ခေၞယူစစ်ဆေူးခင်းခံနေရသူ ကဗဵာဆရာကိုစောဝေသည်ူပီးခဲ့သည့် သောုကာနေႛတငြ် အင်းစိန်အကဵဉ်းထောင်သိုႛေူပာင်းရြေႛခဵပြ်ြေိာံင်ခံရသည်ဟု အကဵဉ်းဦးစီးဌာနမြ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက...
>ဘယ်သူတြေ ဘာမဵား ဘလော့ဂ်နေသလဲ –ိံစ်ြသစ်ကူိးုိံင်ငံသား
> ဘယ်သူတြေ ဘာမဵား ဘလော့ဂ်နေသလဲ –ိံစ်ြသစ်ကူိးုိံင်ငံသား မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းဇန်န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ိုိံင်ိးုိံင်းစနေ၊ိံစ်ြသစ်ရာသီ၊ ၂၇-၁-၂၀၀၈http://nineninesanay.blogspot.com/2008/01/blog-post_27.htmlုကက်ဖတေကြို သင်းကပ်ြတဲ့အေုကာင်ုးကားဖူးပၝသလား။ ဘယ်လို၊ ဘာေုကာင့် စီရင်ရတယ်...
> မိုးမခ ရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီဇန်န၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ိံစ်ြဆန်းမဂဿလာ မိုးမခတေးသစ် – ဦးပန်တဵာသတင်းတိုထြာ နဲႚ သီခဵင်းပဒေသာထင်ပေၞေုကာ်ုကား နာရေးသတင်းမဵားကဗဵာဆရာတင်မိုိးံစ်ြပတ်လည် အောက်မေ့ဖယ်ြအစီအစဉ်ဖန်မီးအိမ်ူမပ်ြကကြ် – ဖိုးသံခေဵာင်းခဵင်းမိုင်ရောက်...
>ူမန်မာူပည်ရြိရာကို မဵက်ြိာံမူပၝ အဲဒီအရပ်မြာ သင်ရဲႛ အိမ် ရြိသည်
>ူမန်မာူပည်ရြိရာကို မဵက်ြိာံမူပၝအဲဒီအရပ်မြာ သင်ရဲႛ အိမ် ရြိသည်မောင်ရစ်ဇန်န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဆရာရေ … ဆရာဆီ စာရေးမယ်နဲႚ ၁ိံစ်ြသာုကာသြားတယ်၊ မရေူးဖစ်ဘူး။ အခုတော့ ရေးရတော့မယ်။ စနေနေႚက...
> တော်ဘုရားလေး အထိမ်းအမတြ် စာပေဆု ခဵီူးမငြ့်ပြဲ ၂၆ ဇန်န၀ၝရီက ကဵင်းပမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဇန်န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၆ ဇန်ြလတငြ် ကယ်ြလန်ြခဲ့သော အမဵြိးသားရေး၊ူငိမ်းခဵမ်းရေိးံငြ့် လတ်ြလပ်စြာ ထုတ်ဖော်ေူပာဆို...
>ဆေးရောင်စုံအူငိမ့် ခဵင်းမိုင်တင်ြလည်း အောင်ပဲခြံ
> ဆေးရောင်စုံအူငိမ့် ခဵင်းမိုင်တင်ြလည်း အောင်ပဲခြံ မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၃ဇန်န၀ၝရီ ၂၇။ ၂၀၀၈ ယမန်နေႛညနေက သီးလေးသီိးံငြ့် ဆေးရောင်စုံအူငိမ့်၏ူပည်ပဖေဵာ်ေူဖပြဲ တခုကို ထိုင်ိးုိံင်ငံ၊ ခဵင်းမိုင် (ဇင်းမယ်)ူမြိႛတော်တငြ်ူပလြုပ်ခဲ့သည်။ အူငိမ့်သဘင်ဖေဵာ်ေူဖပြဲိံငြ့်ိံစ်ြပေၝင်းမဵားစြာ ဝေးကြာနေသည့်...
>ဗမာူပည် လတြ်ေူမာက်ရေး အိုံပညာူပပြဲ ၂၂ ရက်က လန်ဒန်မြာ ကဵင်းပ
> ဗမာူပည် လတြ်ေူမာက်ရေး အိုံပညာူပပြဲ ၂၂ ရက်က လန်ဒန်မြာ ကဵင်းပမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၄ဇန်န၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ဇန်န၀ၝရီ ၂၂ ရက်နေႚက ပတ်အင်ဗင်းနယူးမြာူမန်မာပန်းခဵီဆရာ ထိန်လင်း၊ ဂဵပန်အိုံပညာရငြ်...
> စက်တင်ဘာ သံဃာ့ အရေးတော်ပုံ ၄ လူပည့် ပန်းခဵီုသရသဇန်န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
>စောဝေ၊ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်ူမတ်ခိုင်၊ေုကးမုံ၊ူမန်မာ့အလင်း
> မိုးမခတောထဲက သတင်းအပိုင်းအစမဵား – စောဝေ၊ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်ူမတ်ခိုင်၊ေုကးမုံ၊ူမန်မာ့အလင်းအဝေုးကည့်ူမန်ေူပာင်းဇန်န၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ စောဝေ အခဵစ်ဂဵာနယ်မြာ ဖော်ူပထားတဲ့ ကိုစောဝေရဲႛ ဖေဖော်ဝၝရီဆယ့်လေးကဗဵာနဲႛ ပတ်သက်ူပီး အမဵြိးမဵြိးေူပာဆိုနေုကပၝတယ်။ တခဵြိႛကတော့...
>မောင်စစ်မင်း (ူမန်မိာိုံင်ငံ တေးရေးဆရာမဵား) – ဒေၝင်းအလံ
> ဒေၝင်းအလံမောင်စစ်မင်း (ူမန်မိာိုံင်ငံ တေးရေးဆရာမဵား)ဇန်န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ကေဵာင်းနံရံတ၀ိုက်မြာ ဒေၝင်းအလူံပန်စိုက်မယ်လိုႚေူပာုကားခဲ့တဲ့စကားဒၝ အမန်ြတရားပဲ။ လမြ်ုးကည့်လိုက်ပၝလားစက်တင်ဘာ တော်လန်ြရေးမြာ‘”၈၈” ရဲႛ ဒေၝင်းအလံမဵားလေမြာ တလူလူ လငြ့်တက်ခဲူ့ပီဒၝ အမန်ြတရားပၝ။ (ယနေႚ၊ စက်တင်ဘာတော်လန်ြရေး၊...
> အမေ့ကေဵာင်းက ခေၝင်းလောင်းသုံသရသဇန်န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ူပာမြောင်သော ကောင်းကင် ကန်ႚလန်ႚကာုကီးတခု ကဵနော့်ရြေႚမြာ ရောက်နေသည်။ ၄င်း ကောင်းကင်ုကီးကို အုတ်တံတိုင်းနက်ုကီးက ကန်ႚလန်ႚူဖတ်ထားသည်။ သံတိုင်မဵားက အစိပ်စိပ်ပိုင်းထားသည်။ မရဲတရဲလင်းနေသော လရောင်ကလေးသည်...
> ဆံပင်ညပ်ြဆိုင်ထဲကမုန်တိုင်း –ူမန်မာူပည်ဖြား ကုလအထူးကိုယ်စားလယြ်ကေလတ်ဇန်န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ယနေႛအဖိုႛ ဆံပင်ညပ်ြဆရာတစ်ယောက် ဖောက်သည်မဵာိးံငြ့် အလုပ်ပိနေသည်။ အမဵားစုမြာ လူငယ်မဵာူးဖစ်သည်။ သောုကာနေႛူဖစ်သော်လည်း ဆိုင်ထဲတငြ် လူက အူပည့်။ ဖောက်သည်တစ်ဦး တံခၝးဝတငြ်...
> အယ်ဒီတာူမတ်ခိုင်က စောဝေ ကဗဵာကို စာရေးသူအား အသိမပေးဘဲ ထည့်သငြ်းဖော်ူပူခင်းမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဇန်န၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ဇန်န၀ၝရီလ ၂၁ နေႚထုတ် အခဵစ်ဂဵာနယ်မြာ ဖော်ူပခဲ့တဲ့ စောဝေရဲႚ ကဗဵာဟာ...
>ကမ္တာူပာူးပီ – ကာတနြ်းမောင်ရစ်
> ကမ္တာူပာူးပီ – ကာတနြ်းမောင်ရစ်ဇန်န၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 937 of 948«1...935936937938939...948»